वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको तलबभत्ता सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बन्ने - Aarthiknews
वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको तलबभत्ता सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बन्ने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्य कर्मचारीको तलबभत्ता निर्धातरण गर्ने मागदण्ड बन्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेप्युटी गभर्नर चिन्तमणी सिवाकोटीले शनिबार डा. हरिहरदेव पन्त फाउण्डेसनले डा.हरिदेव पन्तको चौथो स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन ।
उक्त कार्यक्रममा आर्थिक पत्रकार विष्णु वेलबासेलाई डा. हरिहरदेव पन्त आर्थिक पत्रकार सम्मान पत्रकारिता पुरस्कार प्रधान गरिएको थियो । आर्थिक पत्रकार बेलबासेलाई नगद ५० हजार सहित सम्मान गरिएको थियो । साथै सातै प्रदेशका ७ जना महिला उद्यमीहरुलाई ३० हजार नगद सहित प्रमाणपत्रले सम्मान गरिएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा देशैभरीका उद्यमीहरुको सफलताको कथा समेटिएको समृद्धिको मागमा भन्ने पुस्तक समेत विमोचन गरिएको थियो । कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर गणेशबहादुर थापा,निर्धन उत्थानका अध्यक्ष सरदनिधि तिवारीको उपस्थिति रहेको थियो ।